त्यो अपरिचित अनुहार — News of The World
त्यो अपरिचित अनुहार
महेश पौड्याल, काठमाण्डाै नेपालचैत्र १७, २०७४
सप्तकोशी उर्लिएको थियो । माथि हिमालमा निकै पानी परेका हुनुपर्छ, नदीमा उफान थियो डरलाग्दो । धमिलो पानी, पानीको माथिल्लो सतहमा वाफ उडेजस्तो पनि देखिन्थ्यो । विशाल नदीको कर्कश सुसाइ — कुनै शोकगीत जस्तो । लाग्थ्यो, आकाशले यसै नदीको छातीमाथि आफ्नो कुनै मृत सन्तानको देह भर्खरै विसर्जन गरेको छ, र अहिले ऊ शोकमा आँसुका धारा खसाइरहेको छ ।
यो बेला कोशीमा कोही थिएन । बेफ्वाँक बगिरहेको थियो नदी, सागरतिर । किनारमा माझीका दुईचार डुङ्गा बाँधिएका देखिन्थे, तर मान्छेको छावासम्म पनि देखिँदैनथ्यो । तल कोशी ब्यारेजमा भने केही चहलपहल थियो, तर आज माछा तारेर बेच्ने, अथवा किन्ने–खाने मान्छे देखिँदैनथे । कोशी पुलमाथिबाट पूर्व–पश्चिम गुड्ने गाडीको सङ्ख्या पनि, बर्सातले होला, निकै नै पातलो थियो ।
शुक्र माझी सप्तकोशीका निर्जन बगरहरूको पर्यटक बन्न थालेको करिब एकवर्ष भइसकेको थियो । घरमा भुनी दिनरात भन्थी, “किन जान्छौ कोशीमा सधैँरु घरै बसे हुन्न ?” तर ऊ मान्दैनथ्यो । छिमेकी भन्थे, “माझी हो ऊ । नदीमा नगए के हिमाल चढोस् तरु” तर अरु माझीले जस्तो माछा मारेर नल्याएको वर्षदिन भइसकेको थियो ।
आज अबेरसम्म बस्यो शुक्र नदी किनारमा । किन हो किन, उसलाई घर जानै मनलागेन । त्यस दिनको जस्तो बाढी अघिल्लो साल लगभग त्यही बेला आएको थियो कोशीमा । किनारका धेरे घर बगेका थिए । खेततिर पसेको थियो कोशी । भन्नेले चोकमा उसले तीस वर्षदेखि सुन्दैआएकै कुरा भनेका थिएः “भारतले बाँध थुन्यो, नेपाल डुबायो ।” सीमानामा भारतका गरिबहरू भन्थे, “बिहार पूरा बहगैल । दोसौ जन मरगइल । नेपाल ने बाँध खोल्दिल ।” रहस्य न उसले बुझेको थियो, न अरु कसैले । प्रकृतिको कहर थियो, मान्छेको ज्ञान र बुताभन्दा निकै माथि ।
आकाशमा कालो बादलको साम्राज्य थियो । घाम देखिँदैनथे । हातमा एउटा पुरानो छाता लिएर कोशी किनारमै दिन काट्यो शुक्रले । घाम अस्ताएको पत्तै भएन । झमक्कै साँझ परेपछि झस्कियो ।
तर घर जाऊँजस्तो लागेन । वास्तवमा घरमा ऊ केही पनि गर्दैनथ्यो । एक वर्षदेखि उसले व्यवहारको लत्तो पूरै छोडेको थियो । भुनिया घरमा मसिन चलाउँथी, लुगाफाटा सिलाएर जीविका धान्थी । शुक्र स्वतन्त्र थियो ।
ठूलो वर्षाको चेतावनी उसले पनि सुनेको थियो । घरबाट बाहिर नजान सरकारले जारी गरेको हुकुम पनि सुनेको थियो । तर त्यस चेतावनीको उसमा कुनै असर थिएन ।
उसले त्यसदिन कोशी किनारैकिनार करिब सात किलोमिटरको यात्रा गर्यो । हिँड्न त ऊ बेजोड हिँड्नसक्ने मान्छे हो । तर त्यसदिन भने उसको हिँडाइ त्यति गतिशील थिएन । ठाउँठाउँमा ऊ रोकिन्थ्यो, किनार छोडेर नदीको घेरोतिर जान्थ्यो, एउटा हातले छाता समाते पनि अर्को हातले पानीमुनि खै के हो खोजेजस्तो गर्थ्यो, तर बालुवामात्रै निकाल्थ्यो, र पुनः कोशीमै फालिदिन्थ्यो । हरेक तीन सय मिटरमा ऊ यसै गर्थ्यो।
यसै गर्दागर्दै शुक्रले कोशी किनारमै रात पार्यो । नजिकका मान्छे नदेखिने बेला हुँदासम्म ऊ आफ्नो झुपडीभन्दा करिब सात किलोमिटर टाढा, र कोशी ब्यारेजभन्दा करिब चार किलोमिटर दक्षिणमा अवस्थित एक निर्जन बगरमा थियो ।
ऊ यसरी हराइरहन्थ्यो । भुनिया बानी परिसकेकी थिई । खोजीनिधि पनि गरिन ।
रात पर्यो । दिनभरिको मुसलधारे पानी केही थामिएजस्तो भयो । पश्चिमतिर बादल अलिअलि फाटेको हो कि जस्तो देखियो, तर तारा देखिएनन् ।
बर्षा पूरै रोकियो, तर कोशीको रवाफ रोकिएन । यस ठाउँमा रोकिए पनि सातवटा कोशी बोकेर बग्ने सप्तकोशीको सतह घट्न सबै कोशीहरू घट्नुपर्थ्यो । तर तुरन्तै त्यस्तो कुनै सम्भावना थिएन । कोशी उर्लिरह्यो, गाइरह्यो कर्कश गीत । शुक्र किनारमै निदायो ।
उर्लँदो भेलको स्वाभाविक आवाजभन्दा केही पृथक, कुनै बच्चाको हाँसोजस्तो कलिलो आवाज सुनेपछि ऊ झस्केर उठ्यो, मध्यरातमा । उसले हेर्यो कोशीको मूल भँगालोतिर । अहो, कस्तो अचम्म ! कस्तो विस्मय !
नदीको बीचोबीच अनेकौँ सासाना सूर्यहरू एकैचोटि लागेजस्तो उज्यालो थियो । त्यो उज्यालो एउटा अनुहारको वरिपरि गोलाकार प्रभामण्डलको ज्योतिबाट आइरहेको थियो, र त्यस उज्यालोले घेरेको थियो एउटा दिव्य, अलौकिक र ईश्वरीय अनुहार ।
शुक्रले त्यस अनुहारलाई निकै ध्यानसँग हेर्यो । असीम अनुकम्पाले ओतप्रोत आखाँ, जहाँबाट प्रेम बर्सिरहेको थियो निरन्तर । ती आँखा घरि ऊतिर हेर्थे, र घरि पारि क्षितिजतिर । माथिदेखि तलसम्म वस्त्रले ढाकिएको थियो त्यो दिव्य व्यक्तित्व, र ती वस्त्र घरि सेता देखिन्थे, घरि गेरुवा ।
शुक्रले अझै गहिरोसँग हेर्यो त्यस अलौकिक व्यक्तित्वलाई । उसको अँगालोमा एउटा बालक थियो — तीन वर्षजतिको हुँदो हो — र ऊ निरन्तर हाँसिरहेको थियो । अब शुक्रका आँखा त्यस बालकको दिव्य अनुहारतिर केन्द्रित भए । हो, ती आँखा परिचित थिए । त्यो मुखमण्डल, त्यो पनि परिचित । त्यो कपाल, त्यो जीउडाल, छालाको रङ — सबै सबै परिचित ।
रात निकै गहिरिसकेको थियो । कोशी किनारमा चिसो सिरेटो चलेकोचल्यै थियो केहीबेर अघिसम्म । तर यी अनुहारहरू देखेपछि शुक्रलाई एक्कासि न्यानो बनेर आएको आभास भयो । अघिसम्म, भित्रैसम्म कमाउने लुगलुगे सिरोटेमा अहिले कहाँबाट आयो यो मातृवत न्यानोपन रु न अन्धकार, न स्याँठ । शुक्रको रोम रोम एक अलौकिक न्यानोपनले स्पर्शित भइरहेको थियो । विगतका धेरै वर्षमा उसलाई यस्तो कहिल्यै पनि भएको थिएन ।
सबै सबै परिचित, तर त्यस बालकको हाँसो, त्यो खुसी र मुस्कान शुक्रलाई अनौठो र विरानो लाग्यो । उसलाई बारम्बार झझल्को आइरहने अनुहार थियो त्यो । हो, उसको सम्झनामा तरङ्गित भएर आउने बालकको अनुहार र मुखमण्डल यही नै थियो, तर उसले सम्झने गरेको अनुहारमा भने, सादाका लागि टाँसिएको भोक देखिन्थ्यो, पीडा देखिन्थ्यो, रोदन देखिन्थ्यो, आँसु देखिन्थे — मानौँ, यो अनुहार दुःखकै मात्र क्यान्भास हो, र यहाँ आँसुमात्रै फुल्न सक्छ ।
बीच नदीमा दखिएको त्यो अलौकिक दृश्यलाई शुक्रले अपलक हे¥यो । त्यो वयष्क पुरुष त्यस बालकलाई दुवै हातले हावामा फाल्थ्यो, र फेरि दुवै हातले समाउँथ्यो । अनि घरि टाउकोमाथि फनफनी घुमाउँथ्यो, अनि अँगालोमा बेर्थ्यो, र म्वाइँ खान्थ्यो । लाग्थ्यो, ती दुई संसारकै सबैभन्दा खुसी बाबुछोरा हुन् ।
अपरिचित वयस्क, परिचित बालक । शुक्रलाई खपिनसक्नु भयो ।
ऊ आफ्नो ठाउँबाट जुरुक्क उठ्यो, र हातको इशाराले ती दुईलाई किनारतिर बोलायो । सरक्क आए, कुनै आज्ञाकारी बालक जस्तो ।
नदीभित्रका ती दुई र नदीबाहिरको शुक्रबीच अब दुई मिटरजतिको मात्रै दूरी थियो होला । शुक्रले अझ गहिरिएर हेर्यो त्यो बालकलाई । जिन्दगीका कोर्राले खोपिल्टिएको आफ्नो अनुहारमा क्रितृम नै सही, उसले हाँसो पोत्ने प्रयास गर्यो । जमेर सिसाजस्तै भएका आँसुका टुक्राले छियाछिया पारेका, र लामो समयदेखि सुक्खासुक्खा भएका आँखामा वात्सल्य उमार्ने कोसिस गर्यो ।
नदीभित्रको त्यस दिव्य पुरुषको अनुहारबाट माया नै मायाको वर्षा भैरहेको जस्तो देख्यो उसले । उसका गहिरा दृष्टि मानवीय संवेदनाका छालहरूले ओतप्रोत देखिन्थे । त्यो मुखमण्डल, त्यो मन्द मुस्कान, ती अतिशय आकर्षक ओठहरू — लाग्थ्यो ऊ संसारको पिता हो, र आफ्नो पितृत्वले सारा ब्रहमाण्डलाई सिञ्चित गरिरहेको छ ऊ । उसले मन्दिरमा देखेको भगवान्, पत्रिकामा देशेको यसु ख्रिष्ट अथवा कल्पना गरेको अल्लाह त्यसै दिव्य पुरुषमा देख्यो, एकैचोटि ।
र यो बालक ! शुक्रले ठम्यायो उसलाई । उसका आँखाले चिने । उसको धडकनको गति एक्कासि बढेर आयो, कोशीको भेलजस्तै । थर्र काँप्यो जीउ । र हात — एक्कासि फैलिए अगाडि — कोशीतिर, बालकतिरै ।
बोल्नचाहिँ शुक्र केही बोलेन । तर, अगाडि फैलिएका उसका हात हल्लाउँदै उसले मुन्टोको इशाराले त्यो बालकलाई “आऊ !” भनेर आफूतिर बोलायो । तर बालकका दिव्य आँखामा कुनै अपरिचितलाई हेर्दाका जस्ता अलमल दृष्टिमात्रै देखिए । त्यो अनुहारमा कुनै उत्साह वा खुसी केही देखिएन । एक अपरिचित दृष्टि र भयजस्तो केही पोतिएको थियो ती निर्दोष आँखामा ।
धेरैपटक शुक्रले त्यस बालकलाई आफूतिर बोलायो । ती दिव्य पुरुषले पनि दिन खोजे । तर बालक पटक्कै मानेन । ऊ आफूलाई तिनै दिव्य पुरुषको बाहाँतिरै तानिरह्यो । उनैलाई पुलुक्क पुलुक्क हेरिरह्यो । उनको सेताम्य दाडी सुम्सुक्याइरह्यो । तानिरह्यो ।
शुक्रका पनि दाडी थिए, तर काला । उसले पनि ती दाडी देखाएर बालकलाई आकर्षित गर्ने कोसिस ग¥यो । तर बालकमा त्यसको कुनै पनि प्रभाव परेन ।
उसलाई एक्कासि त्यो दिव्य पुरुषसँग रिस उठेर आयो । हुन त त्यो पुरुषले केही पनि गरेको थिएन, तर ऊ आफूभन्दा राम्रो, आकर्षक र बढी प्रममयी भएकै कारणले त्यो बालक ऊसँग टाँसिएको निश्कर्ष उसले निकाल्यो ।
“मलाई दिनुस् मेरो बालक,” उसले भन्यो ।
दिव्य पुरुषले बालकको अनुहारमा पुलुक्क हेरे । बालकले पनि उनलाई हेर्यो । उनले इशाराले सोधे, “ऊ, उहाँसँग जाने हो ?” बालकले टाउको हल्लाउँदै इन्कार गरिदियो, र तिनै पुरषको देहमा थप टाँसियो, लपक्क भएर ।
“मान्दैन,” उनले शुक्रलाई भने ।
“किन मान्दैन ?” शुक्र चिच्यायो । पुरुष हाँसिमात्रै रहे, दिव्य मुस्कान । बालक पनि हाँस्यो । उसका गालामा अलौकिक सौन्दर्य पोखिएको देखिन्थ्यो । एकपल्ट खितिति नै हाँस्यो ऊ, र त्यो हाँसो कोशीको कर्कश ध्वनिलाई चिर्दै पर परसम्म फैलियो ।
“घर आऊ, बाबु । बाबासँग आऊ,” शुक्रले विनीत स्वरमा भन्यो ।
बालक अर्कैतिर फर्कियो ।
“बाबालाई चिनेनौ ? यी हेर त मेरा हात । चिनेनौ ?”
बालकले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । दिव्य पुरषका ओठमा भने हाँसो खेलिरहेको थियो, अझै पनि ।
“घरमै नभए पनि छिमेकमा गाई छ । धेरै बुबु दिन्छ । तिम्रो लागि बुबु ल्याउँछु नि म । अचेल मामुले धेरै लुगा सिलाउँछिन् । तिमीलाई नयाँ लुगा किन्दिन सक्छिन् । आऊ, घर जौँ ।”
यसै बेला दिव्य पुरुषले आफ्ना आफ्नो एउटा हात आकाशतिर उठाए । आकाशबाट उड्दै एउटा सफेद दूधको बोतल झर्यो, र टक्क उनको हातमा आयो । उनले त्यो दूध बालकलाई पिलाए ।
“बाबु, पहिलेजस्तो खडेरी छैन अहिले, गाउँमा । हेर त, कति परिरहेछ पानी ! धेरे फलेको छ धान हाम्रो खेतमा । फेरि तिमी भेकले रुनु पर्दैन बाबु, सत्ते ।”
कुनै प्रतिक्रिया आएन कतैबाट ।
“हाम्रो आँगन सम्झन्छौ ? त्यसमा, कोशीपट्टिको किनारमा ढुङ्गाको पर्खाल लगाएको छु, बाबु । अब कोशीको पानी हाम्रो घरिभत्र पस्दैन । अब हामीलाई भिजाउँदैन ।”
शुक्र बोलिरह्यो । बालक भने माथि माथि आकाशतिर हेरिरह्यो । उसको कुरो सुनेजस्तो पनि गरेन । उसलाई हेरेन पनि ।
“बाबु, मलाई नचिने जस्तो किन गर्छौ ? यी, हेर न मेरा हाथ ! म यिनै हातले बोक्थेँ नि तिमीलाई । खै, कता बिजाउँथ्यो, कता दुख्यो, तिमी रोइमात्रै रहन्थ्यौ । तिमीलाई पानी पिलाउने यी हात, चिनेनौ ? तिमीले पानी पाउँदा किलकिलेबाट पानी भित्र गएको पूरै देखिन्थ्यो । मलाई झलझली सम्झना छ ।
“मभन्दा प्रिय अर्को मान्छे कसरी भयो तिम्रा लागि ? त्यो अपरिचितको अँगालोमा तिमी रमाएको त्यति सुहाएन । मसँग रहँदा तिमी त्यसरी कहिल्यै हाँसेनौ, कहिल्यै खेलेनौ । तिम्रो अनुहारमा अहिले म जुन खुसी देख्छु, र जुन जीवन देख्छु, मसँग रहँदा कहिल्यै देखाएनौ । रोइमात्र रह्यौ । बिरामी मात्र भइरह्यौ । भोकाइमात्र रह्यौ।।।”
उसको गला अबरुद्ध भयो । उसका आँसु कोशीमा मिसिए ।
निकैबेर निस्तब्धताको शासन चल्यो कोशी किनारमा । समय मध्यरातको नजिक थियो सायद । पानी पर्न बन्द भएकोले होला, माथि कोशीको पुलमा एउटादुइटा गाडी हुइँकिएको पनि देखियो ।
आँसु पुछेर ऊ फेरि बोल्यो, “मैले जे जति गरेँ, तिम्रो हाँसोको लागि गरेँ । तर आज तिम्रो अनुहारमा देखिएको त्यहीँ हाँसोले किन पोल्छ ? मैले आफू नखाई नखाई तिमीलाई बलिष्ट बनाउने कोसिस गरेँ । तर पनि, तिमीलाई चाहिने यथेष्ट पोषण हामीले पुर्याउन नसकेकै हो । तरै पनि, तिम्रो बलियो आङ किन सुइरो रोप्छ मेरो मुटुमा ? बाबु, तिमीलाई स्वस्थ बनाउकै लागि मैले सारा कसरत गरेँ, तीन वर्ष । तिमीलाई स्वस्थ देख्दा खुसी छु, तर अपरिचितको काखमा — त्यो सहन सकिरहको छैनँ म । बाबु, मलाई किन बाबा भन्न्दैनौ ? तिमीले मलाई चिन्दैनौ, यो कसरी मानौँ म ? मभन्दा नजिक अरु कोही छ तिम्रो, यो कसरी पत्याऊँ ? मसँग तिम्रो कुनै सम्बन्ध छैन, यो कसरी स्वीकारौँ ? र मैले जति रोए पनि तिमी फर्कँदैनौ, यो कसरी मानौँ ? बाबु, तिमी मेरो हाइनौ, त्यो पुरषको हो — यो कुराले कसरी मन बुझाऊँ ?”
एउटा मुटु पग्लियो कोशीको बगरमा । अरु केही पग्लिएन ।
“तिम्रा आँखाले मलाई चिनेन नि बाबु ! मेरो यताको घर, मेरो काँध र काख, मैले जोहो गरेका अन्न बाली, मैले किनेर ल्याएका लुगाफाटा — यी केही, केही पनि नचाहिने कसरी भयौ बाबु तिमी ? बाबु, बाबाको माया लाग्छ कि लाग्दैन ?”
उसले अन्तिम वाक्य बोलिरहँदा बालक केही द्रवितजस्तो, केही पग्लिएको जस्तो देखियो । उसका आँखा ओसिला पनि देखिए । तर उसले शुक्रतिर आउन हात बढाएन ।
“बाबु, को हो त्यो अपरिचित पुरुष ? किन त्यसको अनुहार मेरोभन्दा राम्रो र आकर्षक छ ? कसरी त्यो त्यति सुकिलो छ ? किन ऊसँग तिमीलाई दिन सबै चीज छ, र मसँग केही पनि छैन ? बाबु, तिम्रो को हो ऊ ? अनि म को हुँ, तिम्रो ?”
यति भनिसक्दा शुक्र कोशीको भँगालोमै पसिसकेको थियो, र बालकलाई छुन कोसिस गरिरहेको थियो । एक्कासि बिजुली चम्कियो आाकाशमा, गड्याङ गरेर मेघ गर्जियो । उसका आँखाले नथाम्ने गरी उज्यालो थपियो कोशीमाथिबाट ती अनुहारहरूमा । अकस्मात, खै कताबाट हो, हजारौँ हजार बालकहरू बर्सिए ती दिव्य पुरुषको हातमाथि, काँधमाथि । उनका हत्केला विस्तारित हुँदै गए, र आएजति सबै बालक त्यसै हत्केलामा अटाउँदै गए । एकैछिनमा अनगिन्ती बालक देखिए उनका हत्केलामा । ती सबै उसै गरी खुसी देखिन्थे । उसै गरी हाँसिरहेका थिए । उनीहरूको हाँसोले कोशीको त्यो निर्जन वक्ष र वगर गुञ्जायमान भयो ।
किनारको छेउ, नदीमा उभिएको शुक्रले यो दृश्य अपलक हेरिरह्यो । हेर्दाहेर्दै ती दिव्य पुरुष, हत्केलामा उभिएका सम्पूर्ण बालकहरूसहित कोशीको भेलबाट उठे, र सुस्तरी हावामा उड्दै उड्दै गए, र आकाशमा अदृश्य भए । शुक्रले माथि आकाशबाट आवाज आएजस्तो सुन्यो, “बाबा, तपाईंभन्दा पनि अगाडि म घर आएँ । नरोई बस्नू ल । म यहाँ खुसी छु । मलाई यहाँ दुख्दैन, भोक पनि लाग्दैन । तपार्इं र मामुलाई पर्खिबस्नेछु ।”
कोशीमाथि चुक पोखिएजस्तो आँध्यारो ओर्लियो ।
काहालिएको शुक्र किनारतिर सर्यो । किनारमा ऊ त्यही ठाउँमा गएर बस्यो, जहाँ ऊ अघि बसेको थियो । उसका आँखा भने माथि आकाशतिरको शून्यता हेरिरहेका थिए ।
यो बेला आकाशमा कालो बादलको बर्कोबाहेक केही पनि थिएन ।
यसपछि शुक्रले कहिल्यै सोधेन कोशीलाई, उसैसँग बगेर गएको उसको छोराको ठेगाना ।
नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रभावशाली अङ्ग्रेजी प्राध्यापक समेत रहनु भएका कथाकार महेश पाैड्याल नेपाली साहित्यमा लोकप्रिय कवि, अनुवादक, तथा समालोचकका रूपमा चिरपरिचित हुनुहुन्छ । – सम्पादक